पुलिस क्लवको आगाडी गण्डकी प्रदेश स्तब्ध, ५–० गोलले पुलिस क्लव विजयी - Butwal Online
पुलिस क्लवको आगाडी गण्डकी प्रदेश स्तब्ध, ५–० गोलले पुलिस क्लव विजयी
बाँके, २८ चैत
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तरगत विहीवार भएको पुरुष हक्की प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लवको सामुन्ने गण्डकी प्रदेश स्तब्ध भएको छ । विहीवार विहान भएको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लव ५–० गोलले विजयी भएको हो ।
गण्डकी प्रदेशलाई प्रतियोगिता अवधिभर दवावमा राखेका नेपाल पुलिसका तर्फबाट पाँच वटै गोल जर्सी नंं. १० का खेलाडी रोमन राणाले गरे । उनले खेलको १० औँ, १२ औँ, ३८ औँ, ४५ औँ र ५५ औँ मिनेटमा गोल गरेको हक्कीका मुख्य प्रशिक्षक विजयन्त शर्मा (पिन्टु) ले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लवले धेरै पेनाल्टी कर्नर पाए पनि अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन । पुलिसले ७ र गण्डकी प्रदेशले दुई पेनाल्टी कर्नर पाएको पिन्टुले जानकारी दिए । पुलिस क्वलमा ५ नं. प्रदेशको तर्फबाट खेलिसकेका सात जना पुराना खेलाडी सहभागी छन् ।
विहीवार विहान भएको दोस्रो खेलमा नेपाल आर्मी विजयी भएको छ । आर्मीले १–० गोलले प्रदेश नं. २ लाई पराजित गरेको हो । आर्मीका जर्सी नं. १० का राम शाहले ५६ औँ मिनेटमा गोल गरे । रेफ्रीले गोल भएको गरेको घोषणालाई अस्विकार गरि बाहिर २ नं. प्रदेश पोष्ट बाहिर निस्केपछि रेफ्रीले आर्मीलाई विजयी भएको घोषणा गरेका थिए ।
यसैगरि, विहीबार बेलुकी भएको तेस्रो खेलमा सुदूरपश्चि प्रदेश विजयी भएको छ । गबेलुकी तेस्रो खेल कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई ३–० गोलले पराजित गरेको हो । सुदूरपश्चिमको तर्फबाट खेलको १७ औँ मिनेटमा जर्सी नंं. १५ का राम परियारले पहिलो गोल गरे । त्सयैसगरि, ४३ औँ मिनेटमा ११ नं. जर्सीका भिमदत्त भट्ट र ५० औँ मिनेटमा २ नं. जर्सीका कान्तुराम पनेरुले एक–एक गोल गरेको मुख्य प्रशिक्षक पिन्टुले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमले ६ र कर्णाली प्रदेशले दुई पेनाल्टी कर्नर पाएका थिए ।
दाङका ३ पालिकामा मौरी ‘जोन’ कार्यक्रम शुरु
एकताले मात्र सफलता हासिल हुन्छ : सभापति देउवा
बैंकको १८ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा थप २ जना पक्राउ